महिलाको शरिरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले टोकेर हो ? यस्तो छ बास्तविकता - Purbeli News
महिलाको शरिरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले टोकेर हो ? यस्तो छ बास्तविकता
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २३, २०७६ समय: २१:४५:४२
बोक्सी, भूत, मसान, लागोभागो लगायतका अन्धविश्वास समाजमा व्याप्त छ । आफूलाई परिआएको अवस्थामा कतिपयले यस्ता विश्वासको सहारा लिन्छन् । बोक्सीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा धामी पुरुष हुन्छन्, बोक्सीको आरोपमा महिलाहरु पर्छन ।सबैभन्दा गरिब, अक्षम, असहाय, श्रीमान नभएको, भए पनि काम गर्न नसक्ने, अधबंैसे आदि महिलालाई बोक्सी लगाउने प्रचलन हुन्छ । बोक्सीको आँखा लागे नराम्रंो हुन्छ भन्ने कुरीति छ ।
एक त गाउँको मनोविज्ञानले त्यो बोक्सी हो है भनेर बुझ्ने भयो । अर्कोतर्फ उनलाई सबैले हेप्ने दृष्टिकोण राखेका हुन्छन् । बोक्सीको आँखा परेमा गाईभैंसीले पनि दुध दिँदैन भन्ने अन्धविश्वास कतिपय ठाउमा छ ।परम्परादेखि बोक्सीको सोच विकास भएको देखिन्छ । हामीलाई धेरै पहिलेदेखि यो सोच आएकाले तत्काल घटाउन कठिन हुन्छ । बोक्सीका नाममा कुटने, पिट्ने, दिसा खुवाउने, अमानवीय व्यवहार गर्ने घटना आजकाल पनि सुनिन्छ ।
यी कुरितीलाई तत्काल हटाउनु पर्छ । लामो समयदेखि मानिसको दिमागमा जरा गाडेकाले बोक्सीप्रथा हटाउन पनि योजनाबद्ध अभियानको जरुरी पर्दछ । मानिसको मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गर्नु ठुलो चुनौती हो ।हाम्रो शरीरमा धेरै किसिमका रोग लाग्न सक्छन् । कुनै महिलाको शरीरमा निलो गोलो डाम हुन्छ । मासंपेशीमा साह्रो कम दबाब परेको ठाउँमा यस्तो देखिन्छ । निलो धब्बामा बोक्सीले छौडां पठाएर रगत चसेको भन्ने चलन छ ।
‘हिलिङ’ गर्ने यो आ–आफ्नै तरिका हो । पानी मन्तरेर खान दिने, खरानी फुकिदिने, चामल हेराएर दिने, पूजा गराउन लगाउने आदि चलन छ । त्यतिबेला एलोप्याथिक उपचार पद्दति थिएन, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी पनि नभएकाले यो नै विकल्प थियो ।यो मनोवैज्ञानिक रुपमा उपचार गर्ने उपाय जस्तो देखिन्थ्यो । कतिपय साना समस्या यस विधिबाट समाधान हुन्थे र मानिसले यस्ता पद्धतिमा झनै विश्वास गर्न थाले ।
त्यसैले भूतको शंका हुनासाथ हाम्रो मानसपटलमा रहेको भूतको आकृति देखा पर्छ । फेरि हाम्रो पुख्र्यौली संस्कारले भूतको अस्थित्व र स्वरुप सिकाएकै छ । त्यही डरका कारण हामीले राती हिड्दा, कतै देख्दा यस्ता अस्तित्व देखें भनेर मानिसहरु अरुलाई भन्दै हिड्छन् । र अरुले पत्याइदिन्छन् । जनबाेलीबाट